Weerar ka dhacay degaanka Deeynuunaay & Al-Shabaab oo sheegtay inay la wareegeen | Allbalcad Online
Home WARARKA Weerar ka dhacay degaanka Deeynuunaay & Al-Shabaab oo sheegtay inay la wareegeen
Weerar ka dhacay degaanka Deeynuunaay & Al-Shabaab oo sheegtay inay la wareegeen
Dagaal culus oo u dhaxeeyay Ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya oo dhinac ah iyo Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka Deeynuunaay oo u dhow Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen Saldhiga Ciidamada ku leeyihiin degaanka Deeynuunaay, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo Maanta Barqadii soo gaaray, kaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Koonfur Galbeed oo dagaalka qyeb ka ahaa ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca Al-Shabaab, isla markaana ay qasaaro gaarsiiyeen.
Saraakiisha Ciidamada dowladda Soomaaliya ee qeybta 60aad ayaan weli si faah faahsan uga hadln dagaalka, waxaana aad u yar wararka laga heli karo dagaalka Gobolka Baay kadib markii Isgaarsiinta Hawada laga saaray.
Previous articleMadaxweynaha Uganda oo magacaabay Madaxweyne ku xigeen iyo ra’iisul Wasaare cusub
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo magacaabay Guddi Sare ee Farsamada Doorashooyinka